HMD Global na-akwadebe Nokia ọhụrụ nwere ihuenyo 6.1-inch | Gam akporosis
HMD Global Nwere Ike nounkpọsa Ekwentị Nokia Ọhụrụ Na-adịghị anyadị ka FCC kwadoro ngwaọrụ ọhụrụ nwere ọtụtụ nọmba ụdị. Akwụkwọ asambodo ahụ gosipụtara ụfọdụ nkọwa dị mkpa gbasara ekwentị.
Edepụtara nọmba ekwentị ahụ dịka "TA-1188", ma ụdị ya gụnyere koodu "TA-1183" na "TA-1184". Ihe ndi ozo n'okpuru!
Ekwenyere na Ọnụ «TA-1188» bụ ụdị zuru ụwa ọnụ nke ga-adị na ahịa niileebe ụdị "TA-1183" na "TA-1184" bụ ndị ọdịiche dị iche iche nke India na China. E wezụga nke ahụ, ọ dị mma ịkọba na nsụgharị ụwa "TA-1188" bụ nke Eurasia Economic Commission of Russia (CEE) kwadoro.
Ngwaọrụ nwere koodu aha 'Wasp'. Akwụkwọ ndị ahụ na-ekpughe na ọ nwere 3 GB nke RAM, 32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime na Jack 3.5 audio Jack. Nokia "TA-1184" nwekwara nkwado abụọ sọrọ, 2.4 GHz Wi-Fi na nkwado maka ndị 4G LTE band 2, 4, 5, 7, 12 na 17. Atụmatụ ndị a niile ga-abịakwa n'ụdị ndị ọzọ, n'ezie, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị nkọwa zuru ezu na ngwaọrụ a.
N'aka nke ọzọ, dịka nkọwa ndị ọzọ enwere ike ịchọpụta, ekwentị ahụ ruru 145.96 mm ogologo, 70.56 mm obosara na 154.83 mm diagonally, nke na-atụgharị gaa na a 6.1 anụ ọhịa ahụ. O di nwute na, e nweghị ndị na Eserese na-egosi ma ọ na-abịa a notch na ihe ụdị.
N'ezie, nke a bụ ekwentị etiti. E nwere echiche na nke a nwere ike ịbụ Nokia 5.2 ga-aga nke ọma Nokia 5.1 nke wepụtara na August gara aga. Agbanyeghị, anyị anọghị na-akwado nke a n'oge a. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-ekpughere ozi ndị ọzọ gbasara ekwentị a na-ekwu maka ya, ebe ọ bụ na eziokwu ahụ abanyela n’ime ahụ bụ akara ngosi ziri ezi na ọ na-akwadebe maka igba egbe ya. Anyị ga-ezute ya na ọnwa na-abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HMD Global na-akwadebe Nokia ọhụrụ nwere ihuenyo 6.1 nke anụ ọhịa